Iiraan oo bilowday inay kordhiso bacriminta Nuclearka ee dalkeeda – Radio Daljir
Luulyo 7, 2019 6:57 b 0
Iiraan ayaa lagu wadaa inay kordhiso xadiga bacriminta Uraniumka ee dalkaasi loo ogolaaday heshiiskii Nuclearka ee uu la galay wadamada Yurub iyo Mareykanka, taasi oo loogu fududeeyey shidaalka ay u iibgayn jirtay caalamka.
Iiraan ayaa sheegtay inay jabinayso xadiga 300kg ee bacriminta Uraniuamka ee loo ogolyahay, ayna qorshaynayso Axadda inay kordhiso in ka baxsan 3.67 boqolkiiba, iyadoo loolan adag la galaysa wadamada Yurub oo isku dayaya in heshiiska uu sidiisii hore uu ahaado.
La taliyha sare ee wadaadka siyaasadda dibadda ee Iiraan Ayatulah Ali Khamanay , Cali Akbar Velayati ayaa sheegay Tehraan inay kordhinayso xadiga loogu talagalay Uraniumka boqolkiiba shan July 2017, taasi oo soo afjarayaysa heshiiskii kama dambayska ee Yurub iyo Iiraan.
Waxaa uu sheegay go’aankan inay tahay mid salka ku haysa inay ka jawaabaan xadgudubyada ay gaysanayaan dhinacyada heshiiska ee Iiraan JCPOA.
Sanadkii 2017kii madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay inuu burburiyo heshiiska oo uu saxiixay madaxwaynihii xilka uga horeeyey ee Obama, Trump ayaa ugu dambayntii heshiiska JCPOAka baxay bishii May ee 2018kii, isagoona xiligaasi kadib kordhiyay cunoqabataynta Iiraan.
Guddoomiyaha gobalka Cayn oo daljir u waramay (Daawo)